.: Ko Moe's Electronics Notes :.: January 2008
DSP (Digital Signal Processing) Reference Book
DSP (Digital Signal Processing) ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတုန်းပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲဒီအပိုင်းမှာ Theory ပိုင်းတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ တကယ်တော့ သူကသပ်သပ် Degree, Diploma တစ်ခုပေးလို့ရတဲ့ Subject ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝနီးပါးမသိခဲ့လို့ ခုမှ စလေ့လာတုန်းပါ။ ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ e-Book လေးကိုတဆင့်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အခြေခံကနေစပြီး တော်တော်လေး စုံစုံလင်လင်ရေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ဒီစာအုပ်ရှာဖွေပေးတဲ့ “မောင်သန့်” ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါ။
Chapter (1) Chapter (2) Chapter (3) Chapter (4) Chapter (5)
Chapter (6) Chapter (7) Chapter (8) Chapter (9) Chapter (10)
Chapter (11) Chapter (12) Chapter (13) Chapter (14) Chapter (15)
Chapter (16) Chapter (17) Chapter (18) Chapter (19) Chapter (20)
Chapter (21) Chapter (22) Chapter (23) Chapter (24) Chapter (25)
Chapter (26) Chapter (27) Chapter (28) Chapter (29) Chapter (30)
Chapter (31) Chapter (32) Chapter (33) Chapter (34)
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, January 30, 2008 1 comment:
Labels: Books, DSP
NEC MCU's Debuggers and Programmers
NEC Microcontroller တွေနဲ့ ရေးတဲ့အခါကြုံရတဲ့ Problem လေးတွေပါ။ ကျွန်တော်သုံးဘူးတာ Programmer နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ PG-FPL3 နဲ့ MiniCUBE2 ပါ။ MiniCUBE2 က Debugging လုပ်လို့ရပြီး FPL3 က Debugging မရပါဘူး။ Target speed 8MHz, 16MHz ရှိတဲ့ MCU တွေပေါ်မူတည်ပြီး Hardware (Programmer) မှာ switch ကိုပြောင်းပေးရပါတယ်။ Software မှာလည်း Setting ပြန်ပြင်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ရင် သုံးလို့မရပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက Port (USB-Serial) မှာ Driver လိုပါတယ်။ Install & Setting လုပ်ပေးရပါတယ်။ အောက်မှာ Setting လုပ်တဲ့ နမူနာပြထားပါတယ်။ PRM (Parameter File) ကိုလည်း Install လုပ်ရပါတယ်။ Software, driver အားလုံးကို NEC ရဲ့ Website မှာ free download လုပ်လို့ရပါတယ်။ FPL3 အတွက်ဆိုရင် FPL3 Software ကိုသုံးပါတယ်။
MiniCUBE2 and Accessories PG-FPL3 FPL3 setup screen
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, January 29, 2008 No comments:
KENWOOD AG-204D Oscillator
Frequency Generator အတွက်ပဲသုံးတာပါ။ အခုသုံးနေတာပေါ့။ သူက Frequency 1 MHz အထိအများဆုံးရတယ်။ Amplitude က 24V (Peak to Peak) အထိရတယ်။ ပြီးတော့ Sine Wave form နဲ့ Square Wave form နှစ်မျိုးထုတ်လို့ရတယ်။ မေ့သွားမှာစိုးလို့ တင်ထားတာပါ။
Posted by ကိုမိုး at Friday, January 25, 2008 No comments:
Mojo with TI MSP430 Microprocessor
အဓိကသုံးတာကတော့ Digital Filter အဖြစ်သုံးတာပါ။ Slave Device (Co-processor) အဖြစ်ပဲသုံးလို့ရပါတယ်။ I/O Ports အရေအတွက်နည်းလို့ပါ။ သူ့မှာ Digital or Analog Receiver Channel ၄ ခုပါပါတယ်။ အမြန်နှုန်းကတော့ 1MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz ဆိုပြီး ကြိုက်တဲ့ Clock ကိုရွေးသုံးနိုင်ပါတယ်။ Clock Divider 1, 2,3, 4, 8, 16, 48 Software ကနေ Setting လုပ်ပေးရုံပါပဲ။ သူနဲ့အတူ တွဲသုံးရတဲ့ Debugger ကတော့ eZ430 Development Tool ပါ။ ၀င်လာတဲ့ Signal တွေကို Filter လုပ်ပြီး Result တန်ဖိုးတွေကို သူနဲ့ဆက်ထားတဲ့ Master (Main Processor) ကို I2C or SPI Communication နဲ့ပြန်ပို့ပေးရပါတယ်။ အကောင်သေးသလောက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
eZ430 and Texas Instruments MSP430x Proecssor
eZ430 and MSP Mojo Target Board
Labels: DSP, Hardware
RS232 Hacking Cable with PC Card
RS232C ကို အသုံးပြုပြီး Electronics Device အချင်းချင်းဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာ ဆက်သွယ်တဲ့ Data Communication တွေကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ Software တစ်မျိုးတော့လိုပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Hacking လုပ်တဲ့ သဘောပေါ့။ မူရင်း Reference တွေပျောက်သွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်သုံးဘူးတာပါ။ Device နှစ်ခုရဲ့ Transmit & Receive Data တွေကိုကြည့်လို့ရတာပေါ့။ အဲဒီလိုကြည့်ပြီး Software ကိုပြန်ပြင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
PC card အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး Port အရေအတွက်ကွာပါတယ်။
Labels: Hardware, RS232